We She Me: 2011
အင်္ဂလိပ်စာ အင်္ဂလိပ်စကားပြောဟာ လေ့လာ လေ့ကျင့်မှု ကောင်းကောင်းမရှိလျင် ကြားလို့ကောင်းအောင် အပြောမတတ်ရုံ သာမက မှန်အောင်ပင် မပြောနိုင်တာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Yes or No လိုမျိုးကိုတောင် မှန်အောင် မပြောတတ်တဲ့ အဖြစ်တွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ
“You don’t like spicy food, do you?” လို့ မေးတာကို ကိုယ်ကလည်း မကြိုက်လို့ ရှိလျှင်
“Yes, I don’t.” ဆိုပြီး ဖြေတတ်ပါတယ်။
“No, I don’t.” လို့ဖြေမှ မှန်ပါတယ်။
ဒီပို့စ်မှာ နေ့စဉ် ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို Yes or No မပါဘဲ တိုတိုကျဉ်းကျဉ်း ဖြေပုံ ဖြေနည်းလေးတွေကို မှတ်မိသလောက် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
တစ်ခုခု မေးလာလို့ ကိုယ့်က ဟုတ်တယ် ဆိုပြီး အတိုင်းအတာနဲ့ ပြန်ဖြေတာမျိုးကတော့
အရမ်းကြီး မဟုတ်လည်း “Rather” ကို တခါတလေ သုံးလည်း ရပါတယ်။
You are glad to be home, aren't you?
Are you sure? လို့ မေးလာရင်
100% လို့ ဖြေသလို
I'm positive ပြန်ဖြေပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Positive ဆိုတာ "Sure" လိုပါပဲ။
စတိုးဆိုင်လိုမျိုးမှာ လျှောက်ကြည့်နေတုန်း ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေက အကူအညီ လိုသလား မေးလာလျင် မလိုပါဘူး ပြန်ဖြေတဲ့အခါ ဒီလိုလည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။
I’m fine. Thanks. ဒါမှမဟုတ် I’m all right, thanks.
တစ်ဘက်လူက ကမ်းလှမ်းမေးလာတာကို No. လို ခပ်ပြတ်ပြတ် ပြန်ဖြေတာမျိုးထက် ဒီလို ပြန်ဖြေ တစ်ဘက်လူမှာ နားထောင်ရ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
ကုန်စုံဆိုင် Check-out counter တွေမှာ ထည့်ဖို့ ပလက်စတစ်အိတ်လိုသလားမေးတာကို လိုပါတယ် ဒီလို ဖြေလည်း ရပါတယ်။
“Yes, please.” ကို “Please” လို့ အတိုပြောလို့ ရပါတယ်။ တစ်ခုခု မေးလာတာ လိုချင်ရင် ဒီလို ပြန်ဖြေပါတယ်။
ကော်ဖီဆိုင်မှာ သကြားထည့်မလား မေးရင် ၂ထုပ် ၂ ဇွန်း ထည့်မည်လို့ ကိုယ်လိုချင်သလောက်ကို အတိအကျ ဒီလို ဖြေပါတယ်။
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ “Yes, I don’t.” လိုမျိုး မှားတတ်တာကတော့ ဒီလိုမျိုးပါ။ ဥပမာ စားသောက်ဆိုင်မှာ ထိုင်နေတုန်း ကိုယ့်စားပွဲက အလွတ်ခုံ တစ်လုံးကို လာတောင်းတဲ့ အခါ
Would you mind if I take it? လို့မေးတာကို
Yeah..yeah... ယူနိုင်ပါတယ် ဆိုပြီး ပြန်ဖြေတတ်တာပါ။ အဓိပ္ပါယ် ပြန်ကြည့်ရင်တော့ စိတ်ဆိုးမလား မေးတာကို စိတ်ဆိုးတယ် ပြန်ဖြေသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီလို မေးလာရင်
“Not at all.” "လုံးဝ စိတ်မရှိပါ"လို့ ပြန်ဖြေပါတယ်။
“Of course not” "စိတ်ဆိုးစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး" လို့လည်း ပြောပါတယ်။
တစ်ခုခု မေးလာလို့ “သိပ်ဟုတ်တာတာပေါ့။ ဒါပေါ့” လို့ ဖြေတာကတော့ အောက်က နမူနာလိုမျိုးပါ။
Of course. လို့ ဖြေရင် ချစ်တာပေါ့လို့ မြန်မာလို ဖြေသလိုမျိုးပါပဲ။ (ချစ်ပါတယ်) Yes ထက် ပိုတဲ့ သဘောရှိပါတယ်။
Life in Australia is quite relaxing, isn’t it?
Indeed. လို့ ဆိုတာ (အဟုတ်ပဲ/ ဟုတ်ပ) လို့ ပြန်ဖြေသလိုမျိုးပါပဲ၊
Yes ပဲ ဖြေတာထက် ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်း ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။
Could you help me to ... ?
Can I visit your home this weekend?
“ကောင်းနေပြီ” “ရပြီ” ကို ဒီလို ဖြေလည်း ရပါတယ်။
Is the taste OK ?
Good enough (for me).
ကိုယ်အသေအချာ မသိတဲ့ အကြောင်း အခြေအနေ တစ်ခုခု ဟုတ်သလား မဟုတ်သလား မေးလာတာကို
I believe so. ဆိုပြီး ကိုယ်ကတော့ မှန်တယ်ယူဆတယ် ပြန်ဖြေပါတယ်။
Will she call us?
Perhaps. ဆိုပြီး မသေချာရင် ဖြေပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ကလည်း ဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုရင်
Hopefully... လိုမျိုး ဖြေလို့ ရတဲ့အခါ ဖြေပါတယ်။
ကိုယ့်ကို မေးလာတာကို အမေးလိုမျိုးနဲ့ ပြန်ဖြေတာမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။
အထက်မှ ရေးထားတာတွေကတော့ Yes or No မေးခွန်းတွေကို Yes ရော No ရော မပါပေမယ့် ပိုမိုကောင်းမွန် နားဝင်ချိုအောင် ပြောနည်းတွေကို မှတ်မိသလောက် စုစည်းထားတာပါ။ အလွယ်လေးတွေ ဖြစ်လို့ သိပြီးသား ဖြစ်နိုင်သလို မပြောမိရင်လည်း နှုတ်တိုက် လေ့ကျင့်ပြီး စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ ခေါင်းထဲ ပေါ်လာတာလေးတွေကိုလည်း ထပ်ဖြည့်သွားပါမည်။ စာဖတ်သူတွေထဲက ဒီလို ပြန်ဖြေတာမျိုးတွေကိုလည်း Contribute လုပ်သွားရင် ပိုမိုပြည့်စုံသွားပါမည်။
22 comments | FLAGS: Others
103 comments | FLAGS: This Blog